राहत शिक्षकहरुको आन्दोलनले हजारौँँ बिद्यार्थीहरुको पढाई प्रभावित ! बडीगाडका राहत शिक्षक आन्दोलनमा, बिद्यालय बन्द, माग पूरा नभए परीक्षामा सहयोग नगर्ने चेतावनी ! – ebaglung.com
२०७५ फाल्गुन २१, मंगलवार १६:०८	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कमल पौडेल, बडीगाड, बागलुङ २०७५ फागुन २१ । आज राहत शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण बडीगाड क्षेत्रका विद्यालयहरु वन्द भएका छन् । राहत शिक्षकहरुलाई अस्थायी शिक्षक सरह प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी हुनुपर्ने लगाएतका मागहरु राखेर राहत शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समितिले नयाँ वन्दै गरेको संघिय शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरु पुरा नभएको भन्दै हिँजो र अस्ति काठमाडौंमा गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको बिरोधमा संघर्ष समितिले देशैभर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको फलस्वरुप बडीगाडमा बिद्यालय बन्द गरिएको बताईएको छ ।
विद्यालयहरु वन्द हुँदा परीक्षा तयारीमा रहेका बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । बडीगाड गाउँपालिकामा यहि फागुन २७ गते देखि वार्षिक परीक्षा संचालन हुँदैछ । परीक्षाको नजिकै विद्यालय वन्द हुँदा विद्यार्थीहरु मर्कामा परेको भन्दै अभिवावकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शिक्षकहरुले आफ्ना माग पुरा नभए परीक्षा समेत संचालनमा सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन् । राहत शिक्षक संगै, विद्यालय कर्मचारी र वालविकासका सहजकर्ताहरु आन्दोलनमा रहेका छन् ।
खर्वाङमा भएको शिक्षकहरुको भेलाले बडीगाड गाउँपालिकास्तरीय राहत शिक्षक संघर्ष समितिको गठन भएको छ । दिपक गिरीको अध्यक्षतामा गठन भएको १५ सदस्यीय समितिको उपाध्यक्षमा ऋषिराम भण्डारी, सचिवमा शिव पोखरेल, सहसचिवमा डुल वहादुर कुँवर (दिपक), कोषाध्यक्ष सरस्वती आचार्य लगाएत रहेका छन् । भेलामा नेपाल सामुदायिक उच्च मावि शिक्षक समिति बडीगाडका संयोजक दीनानाथ पौडेल, उपसंयोजक मोहन केसी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी एकता समिति गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष शिवलाल घिमिरे, लगाएतको सहभागिता रहेको थियो।
त्यस्तै राहत शिक्षकहरुको भेलाले ढालमणि भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सल्लाहकार समितिको समेत गठन गरेको छ । संघर्ष समितिले केन्द्रिय आन्दोलन र त्यसले जारी गरेको निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, आन्दोलनको लागि आवश्यक सवै तयारी संचालन गर्ने लगाएतका निर्णय गरेको छ ।
स्मरणीय छ, देशभर ४० हजार राहत, ३८ हजार वालविकास सहजकर्ता र २५ सय विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।